FAALO MUHIIM AH-Waa maxay Nidaamka Federalku? – Puntland News
Home 2017 February 28 Opinion, Somali News FAALO MUHIIM AH-Waa maxay Nidaamka Federalku?
FAALO MUHIIM AH-Waa maxay Nidaamka Federalku?
February 28, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Federaalku waa nidaam dowladeed kaasoo awoodda dowladda dastuurka dalku u qeybiyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Maamul goboleedyadu waxay leeyihiin meekhaan maamul hoosaad ah, oo waxay haystaan xukun hoosaad ay gobolladooda ku maamulaan. Awoodaha ay ku shaqeeyaan dowlad goboleedyadu dowladda dhexe ma siiso. Awoodahooda waxay ka helaan dastuurka dalka u yaalla. Dowladda qaab kaan ah waxay ka duwan tahay nidaamka unitary ga kaasoo awoodaha dowladda oo dhan uu gacanta ugu jiro dowladda dhexe oo kaliya. Ma jiro nidaam dastuuri ah oo awoodaha u qaybiniya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada nidaamka unitary ga mid kaasoo ka duwan midka fadaraalka ah. Nidaamka fadaraalka ah awoodaha dalka lagu maamulo waxaa loo qaybiyaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waddanka fadaraalka ah. Labada dhinac midkastaa awoodihiisa wuxuu ka helaa dastuurka dalka u qoran. Mid mid ku xad gudbikaraana majiro sababtoo ah sharciga dalka u dhigan baa xad dastuuri ah u sameeyey, awoodahooduna xudduud bay kala leeyihiin.
W/D:- AXMED CABDDIRAXMAAN SHIIKH NUUR, SENIOR DIPLOMAT,
WASAARADDA ARRIMAHA DIBADDA EE JFS.